Terms and Conditions - EasyBiz | Mileage Tracker App
Yakagadziridzwa: May 25, 2019
Ndapota verenga aya Magwaro nemagariro ("Magwaro", "Magwaro uye Zvimwe") musati washandisa EasyBiz Mileage Tracker mobile application (iyo "Service") inoshandiswa neAlexBiz Mileage Tracker ("us", "isu", kana "yedu" ).
Kuwana kwako uye kushandiswa kweBasa kunogadziriswa paunogamuchirwa uye unoteerera neMitemo. Aya Magwaro anoshanda kune vose vashanyi, vashandisi uye vamwe vanoda kufarira kana kushandisa Sangano.
Nekuwana kana kushandisa Sangano unobvumirana kuti uzvisungo nemirairo iyi. Kana iwe usingabvumirane nechinangwa chipi zvacho chemashoko saka iwe hauna mvumo yekuwana Service.
Zvimwe zvikamu zveBasa zvakabhadharwa pamubhadharo wekubhadhara ("Kubhadhara (s)"). Iwe uchakweretwa kusati kwaitika pamusoro pechirevo chekare uye nguva nenguva ("Kutora Bhiri"). Maitiro ekubhadhara anoiswa pamwedzi.
Pakupera kweNhanho yekubhadhara imwe neimwe, Kubhadhara kwako kuchagadziriswa patsva pasi pemirairo yakafanana iyo kunze kwekuti iwe unenge wanyora kana EasyBiz Mileage Tracker inogona kuiisa. Iwe unogona kubvisa kubhadharwa kwako kwekubhadhara kana kuburikidza nepeji yako yekuchengetedzeka kwekambani yekombiyuta kana kuburikidza neAlexBiz Mileage Tracker kutsigira rutsigiro rwekambani.
Nzira yekubhadhara yakakodzera, kusanganisira kadhi rechikwereti, inotarisirwa kushanda kubhadhara kwekubhadhara kwako. Iwe unopa EasyBiz Mileage Tracker nemashoko akakwana uye akazara ekubhadhara mashoko kusanganisira zita rose, kero, nyika, zip code, nhamba yefoni, uye nzira yakakodzera yekubhadhara nzira. Nokupa iyo inowanikwa mashoko, iwe unongobvumira kuvhara EasyBiz Mileage Tracker kuti ubhadhara mari yose yekubhadhara yakawanikwa kuburikidza neAngi yako kune chero zvipi zvekubhadhara.
Iko inofanirwa kubhadhara mari inokundikana kuitika kune chero chikonzero, EasyBiz Mileage Tracker ichabudisa invoice yemagetsi inoratidza kuti unofanira kufambira mberi, pane imwe nguva yakatarwa, nebhadharo yakakwana inowirirana nenguva yekubhadhara sezvinoratidzwa payevoyisi.
EasyBiz Mileage Tracker, mukungwara kwayo chete uye panguva ipi zvayo, inogona kuchinja mari yekubhadharisa yeZvakanyorerwa. Chero chero shanduko yekubhadharisa mari ichabhadhara pamagumo eEuro-ikozvino yekubhadhara Kwekubhadhara.
EasyBiz Mileage Tracker ichakupa iwe chinyorwa chakanaka pamberi pekuchinja kupi zvako mari yekubhadharisa kukupa mukana wekugumisa kubhadhara kwako kusati kwaita shanduko.
Your akaenderera mberi kushandiswa kweSevhisheni mushure mekushandurwa kwemutero wekubhadhara kunotanga kuita chibvumirano chako chekubhadhara iyo yakachinjiswa Mari yekunyoresa.
Zvimwe zvikumbiro zvekubhadhara zvinyorwa zvinogona kutaridzirwa neAllBiz Mileage Tracker pane imwe nyaya-ne-case basis uye yakagamuchirwa chete neAlexBiz Mileage Tracker.
Paunenge uumba kambani nesu, unovimbisa kuti iwe uri pamusoro pezera re 18, uye kuti ruzivo rwaunotipa rwuri rwakakwana, rwakakwana, uye rune nguva dzose. Mashoko asina kukwana, asina kukwana, kana akavharidzirwa angaita kuti kugumiswa kwekamberi yako ikoku pakarepo paNhare.
Iwe unofanirwa kuchengetedza zvakavanzika zvehandi yako uye password, kusanganisira asi kwete kumiganhu yekugadzirirwa kwekombiyuta yako uye / kana kero. Unobvumirana kubvuma mutoro kune chero zvipi nezviitiko zvose kana zviito zvinowanikwa pasi pe-akhawunti yako uye / kana password, kana password yako ine basa redu kana webasa rechitatu. Iwe unofanira kutitaurira pakarepo paunenge uchiziva kukanganisa kupi zvako kwekuchengeteka kana kushandiswa kusina mvumo kwekombi yako.
Iwe haungashandisi sezita rezita zita romumwe munhu kana sangano kana izvo zvisingabvumirwi zviri pamutemo kuti zvishandiswe, zita kana chiziviso chinotungamirirwa kune kodzero ipi zvayo yemumwe munhu kana imwe sangano kunze kwako, pasina kupiwa kwakakodzera. Iwe haungashandise sezita rezita chero zita ripi zvaro rinokuvadza, rakaipa kana rinonyadzisa.
Basa uye zvaro zvepakutanga, zvinoshandiswa uye zvishandiso zviripo uye zvicharamba zviri pfuma chaiyo yeAlexBiz Mileage Tracker uye varairi vayo. Basa iri rakachengetedzwa nekodzero, marimi, nemimwe mitemo yeUnited States nedzimwe nyika. Zviratidzo zvedu nekutengeserana kwekugadzira zvisingashandisi maererano nezvimwe zvigadzirwa kana basa kunze kwemvumo yakanyorwa yakanyorerwa EasyBiz Mileage Tracker.
Basa redu rinogona kunge rine zvinyorwa kune mamwe mawebhu webusaiti kana masangano asina hurumende kana kutungamirirwa ne EasyBiz Mileage Tracker
EasyBiz Mileage Tracker haina simba pamusoro payo, uye haitori mutoro wezvakabatanidzwa, mazano ehupachena, kana maitiro ewebasa rechitatu rebasa kana mashizha. Hatibvumirisi zvipo zveimwe yezvikamu / vanhu kana mawebsite avo.
Iwe unobvuma uye unobvumirana kuti EasyBiz Mileage Tracker haingavi nemhosva kana kutongerwa, zvakananga kana kuti zvisina kurongeka, kune chero kukanganisa kana kurasikirwa kunokonzerwa kana kunonzi kunokonzerwa kana kuenderana nekushandiswa kana kuvimba pane zvakakanganiswa zvakadaro, zvinhu kana mazano anowanikwa kana kuburikidza nedzimwe nzvimbo dzakadaro dzevebhundaneti kana mabasa.
Tinokukurudzira zvikuru kuti uverenge mitemo uye mamiriro ehurumende nemitemo yega yega yebhusi webmasiti kana masangano aunoshanyira.
Unobvumirana nekudzivirira, kubvumidza uye kubata zvinorambidza EasyBiz Mileage Tracker uye muteresi uye varairivha, nevashandi vavo, vashandi vekambani, vashandi, vatungamiri nevatungamiriri, kubva kune uye chero zvinopomerwa, zvose zvinokanganisa, zvikwereti, kurasikirwa, zvikwereti, mari kana chikwereti, uye kutengesa (kusanganisira asi kusingakwanisi kumari yemhosva yemhosva), zvichibva kana kubuda kubva (a) kushandiswa kwako uye kuwanikwa kweBasa, newe kana chero munhu upi zvake achishandisa akaunti yako nephasiwedi, kana b) kuputsa kweMitemo.
Pasinei neAllBiz Mileage Tracker, kana vatungamiri varo, vashandi, vashandisi, vamiririri, vatengesi, kana vanobatana navo, vanofanira kutongerwa chero zvipi zvisiri izvo, zvinokonzera, zvakakosha, zvinokonzerwa kana kuti zvinokuranga, kusanganisira pasina kurerutsa, kurashikirwa kwebatsiro, deta, kushandiswa, kunaka, kana zvimwe kurasikirwa kusingaoneki, zvichibva (i) kwako kuwana kana kushandisa kana kusakwanisa kuwana kana kushandisa Sangano; (ii) chero mufambiro kana zvigaro zvemumwe munhu wechitatu paSebasa; (iii) chero zvinyorwa zvinowanikwa kubva muBasa; uye (iv) kusvibvumirwa kusina mvumo, kushandiswa kana kuchinjwa kwekutumira kwako kana zvigadziriswa, zvingave zvichibva pane warranty, kontrakiti, kutadza (kusanganisira kusava nehanya) kana chero imwe yedzidzo yepamutemo, kana kuti takaziviswa nezvingangodaro kukanganisa, uye kunyange kana mushonga wakarongwa pano unowanikwa kuti wakundikana wechinangwa chawo chinokosha.
Kushandisa kwako kweThisita iri pangozi yako pachako. Basa racho rinopiwa ne "AS IS" uye "AS RAKABATSIRA" hwaro. Basa racho rinopiwa pasina zvibvumirano zvemhando ipi zvayo, ingave inoratidza kana kuti inoreva, kusanganisira, asi isingatarisirwi, inoreva zvivimbiso zvekutengesa, kufanana kwechinangwa chairo, kusina kukanganisa kana nzira yekushanda.
EasyBiz Mileage Tracker iyo michipatimendi, vanobatana navo, uye varairidzi varo havatauri kuti a) Basa rinoshanda risina kuvharwa, rakachengeteka kana rinowanika pane imwe nguva kana nzvimbo; b) chero zvikanganiso kana zvikanganiso zvicharuramiswa; c) Basa harina hutachiwana kana zvimwe zvikamu zvinokuvadza; kana d) migumisiro yekushandisa Sangano ichazadzisa zvaunoda.
Dzimwe hurumende haibvumi kubviswa kwevamwe zvivimbiso kana kubviswa kana kuregererwa kwemhosva kune zvakakosha kana zvinokanganisa, saka zvikwereti zviri kumusoro hazvingashandisi kwauri.
Aya Magwaro achakutungamirirwa uye anoitwa maererano nemitemo yeColorado, United States, pasina hanya nemakakatanwa ayo emitemo.
Kukundikana kwedu kumanikidzira kodzero chero ipi zvayo kana huripo hweMitemo iyi hazvizoiti sekuregererwa kwekodzero idzodzo. Kana chero urongwa hweMitemo iyi hunoonekwa kuti husina kukodzera kana husingashandisirwi nedare, zvisizvo zvinosara zveMitemo icharamba iripo. Aya Magwaro anoita chibvumirano chose pakati pedu pamusoro pebasa redu, uye kusimudzira uye kutsiva chero zvipi nezvipi zvatainge tambobvumirana zvatingave takaita pakati pedu maererano neHurumende.
Tinochengetedza kodzero, pane kungwara kwedu chete, kuchinja kana kugadzirisa Magwaro aya chero nguva. Kana kudzokorodzwa zvinhu zvatichagovera zvisingaiti 30 zuva reziso risati rasvika chero mamwe mazwi matsva achiita. Chii chinoreva kuchinja kwezvinhu kuchagadziriswa pamusana pekuchenjera kwedu chete.
Nokuramba uchiwana kana kushandisa Shanduro yedu mushure mekupi kwekushandurwa kunobudirira, unobvumirana kusungwa nemashoko ekuvandudzwa. Kana iwe usingabvumirani nemashoko matsva, iwe hausisina kodzero yekushandisa Sangano.